ဆံပင်ဖြူခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အစားအစာ(၅)မျိုး
29.2.2016 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ဆံပင်ဖြူခြင်းဆိုတာအိုမင်းလာမှုကို ပြသတဲ့လက္ခဏာများထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေမှာ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်ဖြူလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒ...
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 22
29.2.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
24.2.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 22 တွင်
1. နှလုံးမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ လက္ခဏာ6မျိုး (Page – 5)
Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 21
28.2.2016 | ဂျာနယ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် သတင်းများ
17.2.2016 ထုတ် Health Digest Journal အတွဲ 13 ၊ အမှတ် 21 တွင်
1. ဆားအစားနည်းအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ (Page - 5)
အိပ်မပျော်ရသည့် အကြောင်းအရင်း (၈)ချက်
27.2.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မျက်နှာကို V Shape ပြုလုပ်ခြင်း
26.2.2016 | ဆရာဝန်ကြီးများ ၏ ဆောင်းပါးများ
သွေးစစ်ရုံဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေနိုင်ခြေရှိ/မရှိ သိရှိနိုင်တော့မည်
25.2.2016 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေနိုင်ခြေရှိ/မရှိကို ခန့်မှန်းနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သုတေသီတို့ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါသွေးစစ်နည်...
၀င်းပစိုပြေသော အသားအရေပိုင်ဆိုင်လိုသူများအတွက် နည်းလမ်း(၉)မျိုး
25.2.2016 | အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး
ကြည်လင်လှပသော အသားအရေနှင့်နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အပြုအမူများမှာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသား အရေ၀င်းပစိုပြေလိုသူတိုင်း လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်း...
ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (Prostate Cancer)
25.2.2016 | ကျန်းမာရေး (A-Z)
ဆီးကျိတ်သည် သုတ်ရည်များထုတ်လုပ်ပေးသည့် အကျိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာသည် အမျိုးသားများတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသော ကင်ဆာရောဂါများထဲမှ တစ်ခုအပါအ၀င...